Various Artists - Dan Dar Yee & Zat Win Tay Myar -1 (ဒဏ္ဍာရီ အပါအဝင် ရုပ်ရှင်ဇာတဝင်တေးများ - ၁) [2016 Album] (320Kbps!) Download Link Update ! + Song Booklet - Mg Shan Lay
Home 320 Kbps! Album High Quality Various Artists Various Artists - Dan Dar Yee & Zat Win Tay Myar -1 (ဒဏ္ဍာရီ အပါအဝင် ရုပ်ရှင်ဇာတဝင်တေးများ - ၁) [2016 Album] (320Kbps!) Download Link Update ! + Song Booklet
Various Artists - Dan Dar Yee & Zat Win Tay Myar -1 (ဒဏ္ဍာရီ အပါအဝင် ရုပ်ရှင်ဇာတဝင်တေးများ - ၁) [2016 Album] (320Kbps!) Download Link Update ! + Song Booklet
11:00:00 AM 320 Kbps!, Album, High Quality, Various Artists,
Various Artists - Dan Dar Yee &amp; Zat Win Tay Myar -1 (ဒဏ္ဍာရီ အပါအဝင် ရုပ်ရှင်ဇာတဝင်တေးများ - ၁) [2016 Album] (320Kbps!) + Song Booklet
ကျော်ခဲ - ရန်အောင်
နှလုံးသားမြို့တော် - စိုးပြာ့်သဇင်
မာနမင်းသား - မင်းဦး
ရွာမယ်ဆိုရင်လေ - ထွန်အိန္ဒြာဗို
ပုစ္ဆာဆန်သောမိန်းကလေး - ရဲအောင်
မောင့်မူပိုင်ရှင် - ချစ်စနိုးဦး
တပြည်သူမရွှေထား - နေတိုး
ကိုကိုဘာလို့မုန်းတာလဲ - ဆုပန်ထွာ
ဒဏ္ဍာရီ -မြင့်မတ်
ငယ်သူမို့မသိပါ - ချစ်သုဝေ
ပန်းတွေနဲ့ဝေ - မင်းမော်ကွန်း
တိတ်တခိုးအချစ် - ဝိုင်းစုခိုင်သိန်း
အချော့တော် - ကျော်ကျော်ဗိုလ်
မူပိုင်ရှင်ကြီးမမခိုင် [Bonus Track] - ဇော်ဝင်းထွဋ်